Ambongadiny Chandelier PC-8308 Art fitaratra chandelier fitoviana chandelier mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-8308 Art chandelier fitaratra fitaratra chandelier
Size: savaivony 60/80/100 / 120cm (azo ovaina)
Loko: aseho amin'ny sary (naoty ho an'ny volamena / Chrome)
Fitaovana: vy tsy misy fangarony + vera vita tanana
Fampiharana: efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fisakafoana, efitrano fandriana, efitrano modely, fisotroana, tohatra, efitrano fampirantiana villa duplex
Chandelier fitaratra izay manintona endrika mampiavaka azy - mety amin'ny haingon-trano haingo, haingo maoderina sy mampiavaka azy. Ity chandelier maoderina ity dia manana endrika boribory hahatonga ny tranonao ho mendri-piderana.
Haavo azo ova-15 santimetatra ny haavony x 20 santimetatra ny sakany (manodidina ny 38,1 cm x 50,8 cm), ny halavan'ny rojo: 39,4 santimetatra (100,1 cm) (azo ovaina).
Loharano maivana: tohano loharanom-pahazavana herijika LED 30-50W, sns.
Ny chandelier maoderina dia afaka manitatra ny habakao, avelao hisokatra sy handravaka ny fitaovanao. Tena mety amin'ny trano fisakafoanana, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandriana, efitran-jazavavy, efitranon'ny ankizy, maodely, trano fandraisam-bahiny, sns.
Ity chandelier ity dia manambatra ireo singa mahazatra sy maoderina ary ny vokatry ny fanaovana labozia, amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta mba hahazoana antoka fa maharitra sy azo itokisana ny vokatrao!
Ny chandelier ao amin'ny tobin'ny zanabolana habakabaka dia lasa teboka ifantohana ao an-tranonao. Ny atin'ny tampon'ny jiro amin'ny valindrihana amin'ny tampony dia raikitra amin'ny fitoeran-jiro amin'ny kavina vy efatra. Ho an'ny vera mampiavaka azy, afaka manome ny vokatra hazavana miavaka sy fanavaozana ny vokatra izy io.
Art chandelier fitaratra zavakanto chandelier toetra
Teo aloha: Chandelier PC-8257 Art chandelier fitaratra mpanefy chandelier toetra
Manaraka: Chandelier PC-8226 endrika lamaody avaratra chandelier art chandelier
Jiro latabatra misy alokaloka vita amin'ny marbra TD563
Chandelier 33803 Crystal atmosphe tsotra izao ...
Hazavana valin-drihana 88100 Crystal valin-drihana lantaly ...